Queen ny harena | Coinfalls Casino
Queen ny harena dia mamirapiratra slot lalao izay manome anao amin'ny 117,649 Megaways mba handresy. dia narafitra over 6 X 7 miraingiraingy azon'ny Grid, Big Time lalao ity Powered feno hatsaran-tarehy tonga amin'ny miraingiraingy azon'ny tampon-tanety sy ny endri-javatra Clone Reel. Ny sary dia mazava tapaka sy manana mpanjaka mihevitra azy ireo amin'ny firavaka-studded marika firavahanareo ny reels.
Big Time lalao dia vaovao ao amin'ny aterineto entrant Casino lalao indostria sy efa namoaka folo slot lalao hatramin'izao, ary koa ny an-tserasera BlackJack sy Roulette. Ny foibeny any Aostralia, Sydney, izy ireo mpanjifa amin'ny endrika izao tontolo izao malaza trano filokana niely manerana izao tontolo izao. Ny lalao dia misy amin'ny fiteny roa-polo mahery teny amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao.
Queen ny harena dia tena mahavariana slot mitady lalao izay dia tonga noho ny tsy manam-paharoa miraingiraingy azon'ny rafitra. manana 6 reels amin'ny 7 fanehoana an'ohatra izay nanenika ny tsirairay izany. Ireo dia ahitana marika Mason'ny Horus, Scarabs, Firavaka Ra miaraka amin'ny Queen ny tenany izay miasa ho toy ny bibidia. Ny fijery iray manontolo ary hahatsapa ny lalao dia classy sy famantarana ny zava-drehetra raitra. Ny mesmerizing Queen ka nanaraka ny 7x multiplier Fandresena ho an'ny rehetra ao am-pototry manolo lalao sy haingana ny marika rehetra tao amin'ny Mivembena hahatonga ny miraingiraingy azon'ny feno an'ala. Koa raha manao mandresy mitambatra mampiasa 2 bibidia reels, ianao hahazo tsara tarehy 49x multiplier. The pyramid symbol is the only symbol that pays even if you land two of them on the adjacent reels. Misy marika sivy hafa afa-tsy ho amin'ny bibidia sy anisan'izany ny enina nitsinjaka karatra fanehoana an'ohatra. Ny payouts azo teny amin'ny fipihana eo amin'ny paytable bokotra.
Reel Clone endri-javatra mitranga tsapaka amin'ny rehetra namoly. Eto ny reels hahabe mamokatra hatramin'ny enina mitovy reels. Ary, ny feno reels bibidia hihamaro namokatra koa niakatra ho any 5 karazana feno reels bibidia sy ny kisendrasendra multiplier vokany ampiharina ho azy ireo.
Megaways manome anao 117,649 fomba fanaovana nandresy tsikombakomba. Izany no azo atao afa-tsy noho ny mihalalaha miraingiraingy azon'ny rafitra i.e 6 reels ary 7 marika Grid.
Queen ny harena manana tsara tarehy ho mpilalao mendrika Miverina isan-jaton'ny 96.9. Ny kely indrindra Bet ampiasaina hilalao izany 0.20 ary ny ambony indrindra dia £40.
Queen ny harena dia tena tsara tarehy Ejiptiana-slot nanana lohahevitra izay mendrika mampanantena Fandresena ny mpilalao. Ny feno miraingiraingy azon'ny bibidia sy ny endri-javatra Clone Reel dia tsara tarehy manaitra ary aoka ianao manana tsara ny fialam-boly raha milalao izany.